Umshini osetshenzisiwe we-hay baler manual silage baling Machine wenza isixhumi sesikwele
Lesi sandla sisebenza nge-hay baler singavala izinto zokwakha ezinjengotshani, utshani noma amaqabunga epulasitiki, iphepha, amakhadibhodi, imfucuza yepulazi, njll,enezinzuzo eziningi njengoba ngokuvamile amabhele asetshenziselwa ukugcina izinto zokwedlulela noma ukondla izilwane. utshani kungumkhiqizo wezitshalo ezinamabele amabhali enziwe ngotshani asetshenziswa njengento yokwakha. Utshani yilokho okusele ngemuva kokuba okusanhlamvu namakhoba kususiwe; yaziwa nangokuthi isiqu sesitshalo. I-Afrika iyikhaya lezitshalo eziningi zomdabu zomdabu, lobu buchwepheshe bungasiza cishe kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba.
Umshini wokubheja wezandla uwumsebenzi owodwa wokulima womuntu oyedwa ngokuhlinzekwa nge-lever egcwele umthwalo we-spring, ukwenza amabhali ngempumelelo, ngosizo lwe-lever ibekwe kahle ngokuphelele ekulahleni imfucumfucu ku-baler futhi iqale ukucindezela. Idizayini eyenziwe kabusha yenza kube lula kakhulu ukubopha amabharele akheke ukugcina i-lever ikhiyiwe, Ngaleyo ndlela sithuthukisa ukusebenza kahle kwekhompiyutha. Futhi, umsebenzisi angahambisa umshini ngamasondo ngokuya ngezidingo zawo zokukhiqiza.
Izici zesandla esisebenzisiwe se-hay baler
1.Uhlaka oluphambili lomshini we-baler ophethwe ngesandla lwenziwe ngensimbi yokubumba nensimbi yensimbi, Ngeke iqinisekise kuphela umthamo we-compressor yomshini we-silage baling hand, kodwa futhi uqinisekise impilo yenkonzo yomshini. Ngaphandle kwalokho, futhi kungonga izindleko zokuthenga kumakhasimende ethu.
2.Incwajana yokutshala imali engaphansi, ukusebenza okusheshayo kanye nezinzuzo eziphezulu ezihlanganisiwe. Okubikiwe kwe-silage baler kunganciphisa ukulahleka nokulahleka, Ukushintshwa kokushintshwa kwama-enzyme kanye nokulahleka kokugeleza kwetshetshezi kuncishiswa kakhulu,ikhwalithi ye-silage ilungile, okuqukethwe kwamaprotheni ongahluziwe kuphakeme, futhi isivuno sobisi sithuthukiswa kakhulu.
3.Usayizi wegumbi lokucindezela nosayizi wephakheji ungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
4.Azikho izidingo zamandla ,umshini wezandla we-hay baling usebenza ngesandla ,lungasetshenziswa endaweni okuntuleka kukagesi .
Amapharamitha wezobuchwepheshe womshini wokulinganisa i-silage baling
（Kg / h） Kuya nge-opharetha
Isimo somthengisi Isikwele
Izinto zokwenziwa Kukhona,utshani ,isalage ,upulasitiki njll